🏊‍♀️ बडा | Hultsfred मा जानुहोस्
हाम्रो एक पौडी पोखरी पत्ता लगाउनुहोस्!
तालमा डुब्न चाहनु हुन्छ? हाम्रो नगरपालिका वरिपरि, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै अद्भुत नुहाउने ठाउँहरू छन्। औंलाहरू वा नरम घाँस बीच बालुवा - यहाँ एक चिसो डुबकी कहिल्यै टाढा छैन। यदि तपाईं र बच्चाहरू 27-डिग्री इनडोर पूलमा पौडी खेल्न रुचाउँछन् भने, तब Hagadal को पौंडी पोखरी हेर्न लायक छ!
Hagadal पौंडी पोखरी र खेल हल
Hagadal पौडी खेल्न र खेल हलले पौडी खेल्न, व्यायाम, मालिश गर्न वा साथीहरूसँग ह्या hanging्गआउट गर्न र कफिको प्रस्ताव गर्दछ। सुविधा राम्रो व्यायाम ट्रेल्सको साथ प्रकृतिको नजिक छ।